ED Recovery Stories2- သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သည်
ED Recovery Stories2သည်ပိုမိုတိုတောင်းသောအကောင့်များပါ ၀ င်သောစာမျက်နှာ ၈ ခုပါ ၀ င်သည့်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လုပ်ပါ ငါ့ဘောင်းဘီထဲကအရာတစ်ခုကငါ့ရည်းစားနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းကနေဆင်းသက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဘလော့မှ Link ကို
porn နှင့် ED အကြားဆက်နွယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက် ပို၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမဖြစ်နိုင်ပါ။ ငါဤသံသရာကိုလိုက်နာပါမယ်။ လိင်မပျော်အောင်၊ အငြိုးတကြီးဝါသနာပါတာကိုရပ်တန့်ပါ (ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါ) -> ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ပါ။ porn to -> အဆင့် ၁ သို့သွားပါ။ ဆိုးရွားလှသည့်ကာလ၌၊ ကျွန်ုပ်သည်အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်ယင်းကိုရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်ထိုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ငါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မနေခဲ့ပါ၊ အဲဒါကိုလုပ်နေရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲကျွန်တော့်ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်အောင်ကူညီပေးနိုင်လို့ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအခုငါတွေ့ပြီ။ အော်ဂဇင်အားလုံးကိုခဏစွန့်ပြီးပြန်လည်ချိန်ခွင်လျှာညှိပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ဖိအားပေးပါ။
Re: အ PIED ၏အခြားသူတွေအတွေ့အကြုံများကနေပြင်းထန်မှုသိချင်ပါသလား
အဲဒါမလေးဘူးလို့ထင်တယ် Hard mode ကို reboot လုပ်ဖို့အကြံပေးပါမယ်။ ငါမစခင်ငါဟာအစစ်အမှန်ဘဝကိုမခဲယဉ်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့်အခုတော့ငါနှစ်လရှိပြီ၊
နေ့ 17: PIED ကုသပေးခဲ့
, NoFap ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါစိုက်ထူယခုမကြာခဏရရှိသောအတွက်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်နံနက်သစ်သားလုံးဝနီးပါးမရှိခဲ့ပါ၊ ပူပြင်းလှသောမိန်းကလေးကိုတွေ့သောအခါ၌ပင်စိုက်ထူရန်ခဲယဉ်းသည်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာငါနေ့တိုင်းနံနက်ခင်းသစ်ခိုးတယ်။ ငါပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးမြင်သောအခါငါစိုက်ထူရ။ ဒါဟာပြtheနာဖြစ်ကြောင်းစိုက်ထူမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းရဲ့စိတ်ထဲဝင်လာတဲ့အတွေးတွေပါ။ အတွေးတွေကမင်းကိုမှားယွင်းတဲ့လမ်းစဉ်ဆီပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။
ငါကိုယ်တိုင်“ တကယ့်အမျိုးသမီး” အခြေအနေနှင့်ငါ့ ဦး နှောက်ကို“ ဝါသနာ” ခြင်းကဲ့သို့သောပြissuesနာများရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်နစ်နာစေသည်ဟုခံစားခဲ့ရလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဤညစ်ညမ်းမှု / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါတကယ်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါငါမှာ ED ရှိခဲ့တယ်။ အဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်ရုံစိတ်ပျက်။ သူမသည်အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဆုံးသောသူဖြစ်သည်၊ သူမသည်ရန်လိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ငါ "reboot" ဖြစ်စဉ်ကိုအောင်မြင်စွာစတင်ပါပြီ။ ပထမ ဦး စွာရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ရှိအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောလိင်အစီအစဉ်များကိုပင်ရုပ်သိမ်းပါ။ ထို့နောက်သင်၏ system တစ်လျှောက်လုံးသွေးကိုစုပ်ရန်အားစိုက်ထုတ်ပါ။ သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့လိုပါက porn မဟုတ်ဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုးဆွရန်ယောက်ျားမိန်းမတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုပါ။ တဖြည်းဖြည်းစိုက်ထူပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကငါနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်
အိုကေဒါဒါအရမ်းကောင်းတယ် ငါ့ကောင်မလေးအိပ်ပျော်သွားတယ်၊ ငါတို့အောင်မြင်စွာလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ငါ၏အစိုက်ထူဖြစ်သင့်သည်ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့အစိုင်အခဲမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထူးဆန်းတာကဒီလောက်ကြာကြာမခံခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒုတိယအကြိမ်စီမံခဲ့တယ်။ ငါအများကြီးပိုကောင်းလုပျနိုငျပေမယ့်သူမလည်းပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
သက်သာရာရခြင်းသည်အလွန်ကြီးမားသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ကကျွန်ုပ်သည်ခက်ခဲသောအချိန်များနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျဝေဒနာများစွာခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ဤမျှလောက်အားပေးမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအကျင့်ကိုကျင့်စပြုလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ငါပိုအကောင်းမြင်လာသည်။ ဒါပါ။ ငါတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာတွေအားလုံး အခု PMO'ing ဆိုတဲ့အတွေးကဟာသကြီးတစ်ခုလိုပဲ။ ငါ P လုံးဝမစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာထားခြင်းကကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။
သငျသညျ ED အတွက်အစာရှောင်တိုးတက်မှုတွေ့မြင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့် DE ရစ်စခွေငျးငှါ
ငါအခုအချိန်အထိငါ့ခရီးနှင့်ပတ်သက်။ တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ယခုငါသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွန့်ခွာပြီးကတည်းကတက်တက်ကြွကြွစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အစစ်အမှန်တိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
“ မှားယွင်းသော” လိင် (porn) ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ gf ကိုတကယ်ကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းသည်အလွန်ကျိုးနပ်ပါသည်။ လူတို့၊ စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံကြစဉ်၊
သို့သော် DE သည်မထွက်သွားပါ။ သူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုအော်ဂဇင်မယူရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်သူမမသေချာကြောင်းခံစားရသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သူမနှင့် ပတ်သက်၍ သူမလုံခြုံမှု၊ ဒါကြောင့်သူမဟာသူမမဟုတ်ကြောင်းသူမစိတ်ချခဲ့ပြီး၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း မလုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ခံစားခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ခက်ခဲတဲ့ခေါ်ဆိုမှု ....
ငါထင်တာကလူတွေထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ပြproblemနာပဲ။ လူငယ်များသည်သူတို့၏ဆရာ ၀ န်များသို့ ED အကြောင်းသွားနေကြသည်၊ ငါအကြောင်းပြချက်မှာကျွန်ုပ်သည်အသည်းအသန်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနီးပါးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်တွေ့မြင်ရသောအမျိုးသားအဆင့်မြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်များအတွက်ကြော်ငြာနှင့်ကြော်ငြာများစွာကိုတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးပါ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းကိုအထူးသဖြင့်လူငယ်များအတွက်ရှက်စရာကောင်းသည့်ပြbecauseနာဖြစ်သောကြောင့်မည်သူမျှမပြောလိုကြပါ။ ၎င်းသည်သိပ္ပံပညာဖြင့်ပိုမိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုငါမုန်းတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အသက် ၃၀ အစောပိုင်း၌ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသောဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက် porn သည်မကြာသေးမီကမှဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်မှာစွဲလမ်းမှုပြproblemနာကြီးထွားမှုမရှိခဲ့ဘူး၊ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းကအထက်တန်းကျောင်းမှာအင်တာနက်ကိုပုံမှန်သုံးခွင့်မရခဲ့လို့ပါ။
ဒီကနေ့ကလေးတွေဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သူတို့ကဒါစောလွန်း hit နေကြသည်။ ဆင်းရဲတဲ့လူငယ်တွေ၊ ငါ့ပြproblemနာကတစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိမယ်လို့ငါပြောမယ်။ ထိုအချိန်မတိုင်မီက၎င်းသည်မှန်သောလိင်နှင့်ရံဖန်ရံခါရောနှောခြင်းကိုသာရံဖန်ရံခါ porn ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါကညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းကိုအလွန်အမင်းအလွန်အမင်းမကြည့်မိပါ၊ ဒါဟာဟောင်းဆ g /fနှင့်အတူတစ်ခက်သည်းထိတ်ရင်ဖိုပြီးနောက်လုပ်ဖို့ဓလေ့ထုံးစံ / ပိုတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမကြာခဏညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုကျွန်ုပ်သိခဲ့ပါက၎င်းကိုမည်သည့်အချိန်ကမျှလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အားလုံးပြီးသွားရင်လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အတ္တ / ခန္တာကိုယ်ထက်ပိုအရေးကြီးတာဘာလဲ။ ငါကဒီအန္တရာယ်အတွက်တင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကိုငါသိပြီးပြီလို့ပြန်လှည့်ဖို့မတွန့်ဆုတ်ဘဲငါလုံးဝရပ်တန့်လိုက်ပြီ။
ငါသံ - ချုပ်ကိုင် syndrome ရောဂါအဘို့အ nofap စတင်ခဲ့သည်။ ၇၅ ရက်ကုန်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူကပြန်ဆပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၉၀ နီးပါးရှိသော်လည်းတစ်နှစ်သွားရန်စီစဉ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်ထံ၌မေးခွန်းများမေးပါ။ 🙂
၅ နှစ်တာကာလအတွင်းကျမနဲ့ရည်းစားတွေကြားမှာပြသနာတွေရှိနေတယ်။ fapping လုပ်တဲ့အခါငါအထွတ်အထိပ်ရောက်နေပြီး nofap ကို (၅-၂၀) မိနစ်လောက်မျှမျှတတအထိတက်နိုင်သေးတယ်။ ငါသော်လည်းဖြူ - knuckling ဖြစ်ခဲ့သည် ဒါကငါ့ကိုဘောင်းဘီဘား၊ blowjay (သို့) သူမ sexy အချိန်တုန်းကလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတာတောင်မှဘယ်တော့မှအထွတ်အထိပ်ရောက်အောင်မဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ ဘာပဲလုပ်လုပ်ငါမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးကွာသွားပုံရသည်။ သို့သော် ၇၅ ရက် nofap သို့ရောက်သောအခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဝေးဝေးနေခြင်းကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်စေသည်။ ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်ရန်ဤလှုပ်ခတ်နေသောမြင်ကွင်းများကိုကျွန်ုပ်မကြည့်ပါ။ ငါ့ရည်းစားလိုပဲငါ့အနားမှာနေဖို့လိုတယ်
ငါပြောတာရှက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကငါ့ကောင်မလေးကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်ဆွဲဆောင်မှုနည်းစေတယ်။ ကျွန်မရဲ့ရည်းစားကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနင့်ကိုကြည့်နေတဲ့အခါအဲဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ယောက်ျားတွေအတူတကွအပြန်အလှန်စကားပြောနေကြတယ် သင်နှင့်သင်၏ရည်းစားသာဖြစ်သည့်အခါသင်အမှတ်မပေးလျှင်သင်အမှန်တကယ်များစွာမမြင်နိုင်ပါ။ nofap နှင့် noporn ပြီးနောက်သူမသည်ငါနှင့်အတူရှိနေခြင်းကြောင့်ဖွင့်လိုက်သည်။ ငါခံစားချက်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့ ဦး တည်သည်ဟုခံစားရသောနောက်ထပ်အရာတစ်ခုမှာအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖမ်းဆုပ်လိုက်သည်။ သုက်သည်ကျွန်ုပ်၏ urethra ၌နေလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျန်းမာရေးပြconcernsနာများကိုဤသို့ပြုခြင်းမှကျွန်ုပ်တွေးမိသည်၊ သို့သော်၎င်းကို ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းလုပ်ဆောင်ပြီးပါက၊ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်အထိအရာတစ်ခုခုကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည် (မိုက်မဲ၊ ကျွန်ုပ်သိသည်။ )
၇၅ ရက်ကြာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရည်းစားရဲ့ဆန္ဒနဲ့အထွတ်အထိပ်ရောက်သွားတယ်။ ၎င်းသည်သူမနှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ကြီးမားသောအတ္တဆန်ဆန်တိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ ရွှင်လန်းမှုနှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
TL; DR ငါသည်ငါ့ GF ထံမှပါးစပ်သို့မဟုတ်လက်စွဲဆွထံမှအထွတ်အထိပ်မပေးနိုင်ဘူး။ nofap ကကျွန်တော့်ကိုသူမကိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်သင်ပေးတယ်။
ယာယီ ED သည်မည်သည့်နေရာမှသင့်ကိုမထိမရောက်မချင်း၎င်းသည်ပြaနာဖြစ်ကြောင်းသင်ပင်မသိပါ။ ဒါကြောင့်စကားလုံးကထွက်ဖို့လိုတယ်။ ငါအခုပြန်လည်နာလန်ထူဖို့လမ်းပေါ်မှာရှိနေပြီ၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာသက်သာလာပြီ။ ငါမကြာမီငါ့ studly နည်းလမ်းများပြန်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ အစားအသောက်, လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်တနေ့အနိုင်ရပါဝါပါလိမ့်မယ်။
အပြည့်အ ၀ ပြန်နိုင်ဖို့ ၃ ပတ်လောက်ကြာခဲ့တယ်။ စိတ်သက်သာမှုပါတကား။ တကယ်တော့ငါအရင်ကထက်ယခုအများကြီးပိုကောင်းတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါကြာရှည်ခံသည်နှင့် foreplay နှင့်အခြားအရာအများကြီးပိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူသိတယ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူကြွလာ။ ငါကံကောင်းတယ်လို့ငါထင်တယ် သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်များ၌တစ်နှစ်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်လောက်သာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအနက်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွာခြားမှုရှိ / မရှိသိရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားသည်။
နေ့ 68- စိုက်ထူတိုးတက်အောင်နေကြသည်
Day 68 နှင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောတိုးတက်မှုများမှာ -
မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ထိတွေ့စကားပြောသည့်အခါစိုက်ထူခြင်း
အဘယ်သူမျှမ fap အလုပ်လုပ်ကြောင်းယုံကြည်မှု
ဒီ၏နောက်အဆင့်ကိုမျှော်လင့်။ ငါ့ဘဝမှာငါချခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု။ အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်! သတိရပါရက်ပေါင်း 90 တစ်သက်တာခရီး၏အစပဲ!
ဒါ့အပြင်ရက်ပေါင်းနှစ်ဆယ်သာကြာသော်လည်းငါယခုအထိပြုလုပ်ခဲ့သည့် ED ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုကျွန်တော်နှစ်သက်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူဤအချက်မှာသိသိသာသာအားကောင်းဖြစ်ကြသည်။ အတော်လေး 'အပြည့်အဝအနာရောဂါငြိမ်းစရာ' မဟုတ်ပေမယ့်အများကြီးပိုကောင်း။ လင့်ခ်
ငါမကြာသေးမီကလက်တွေ့ကျကျရှုထောင့်ကနေ, ယောက်ျားတွေဒီနှင့်အတူ (porn / ED) နဲ့သူတို့ရဲ့ရုန်းကန်မှုများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာဖိုရမ်ကိုချည် (အမှန်တကယ်အတော်လေးအနည်းငယ်) ကိုမကြာသေးမီကဖတ်ရှုဖို့အတန်ငယ်အံ့သြသွားတယ်။ အများအားဖြင့်ငယ်ရွယ်သောလူငယ်များ၊ အသက် ၂၀ ကျော်သူများမှာမိန်းကလေးတ ဦး နှင့် ထပ်မံ၍ မရနိုင်တော့ပါ၊ သူတို့အားလုံးသည်ပြင်းထန်သော porn / masturbation အလေ့အထရှိသည်။ ယောက်ျားများသည်သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မည်သည့်အခါမျှပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးမည်ကိုကြောက်ရွံ့။ မည်သည့်အခါကမျှပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမဆွေးနွေးပါ။ ဒါပေမယ့်တစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုကျန်းမာရေးဖိုရမ်တစ်ခုမှာပြောပြပြီးတူညီတဲ့အရာနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့တခြားယောက်ျားတွေဆီကအဖြေ ၅၀၊ ၁၀၀ ရှိတဲ့အခါ ... ဒါကအစစ်အမှန်ပါ။
နောက်တစ်ညမှာပြည့်တန်ဆာအကြောင်းအစီအစဉ်ကိုငါကြည့်နေတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များမှမိန်းကလေးအချို့ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာသူတို့ပြောတာကနာတာရှည်ညစ်ညမ်းတဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုပြောနိုင်တာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူး၊ လူကိုထလာနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ အမျိုးသားလိင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျွမ်းကျင်စွာလေ့ကျင့်ထားသောမိန်းကလေးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်မကိုက်ညီပါ၊ အမှန်တကယ်တွင်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုနေသောမိန်းကလေးများလည်းပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခင်မှုကိုသာလိုလားသော“ သာမန်” အမျိုးသမီးများသည်အခွင့်အရေးမရကြပါ။
ငါစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ချိန်၌ဤတွင်ကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သလောက်မရေးခဲ့ပါ။ ငါတိုတိုအားနောက်ဆုံးသတင်းပေးရန်၊ လူအားခွန်အားပေးရန်နှင့်နွေးထွေးသောဤအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အမှန်မေ့မသွားသည်ကိုရေးရန်ရေးခြင်းသာဖြစ်သည်။ လိင်ဟာပုံမှန်ဖြစ်တာကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်ငါပျော်တယ်။ ငါအရမ်းလိင်မှုကိစ္စဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဒီပြwithနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းငါ့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါပြောချင်တာကဒီမှာလူတိုင်း [rebooting] အစီအစဉ်ကိုလိုက်နာသင့်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါဟာလုံးဝရထိုက်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။
လိင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဇများထဲမှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကောင်းစွာဂရုစိုက်ပါက၎င်းသည်ကောင်းစွာဖြစ်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုဖြတ်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဘဝတွင်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအရာများကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းအားဖြင့်စတင်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုပျော်ရွှင်စေရန်နှင့်ပျော်ရွှင်စေလိုသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ခံထိုက်သောအရာတစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့် ပတ်သက်၍ ယေဘုယျအားဖြင့်အကောင်းမြင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်မှာသေချာသည်။
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကကျွန်ုပ်သည်လိင်ကိုအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ယူဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်စတင်တွေးတောမိသည်။ ဒီနေ့ဒီဟာကပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်ပုံရတယ်။ ဒီမှာလူတိုင်းကစိုက်ထူနိုင်စွမ်းကိုသံသယမ ၀ င်သင့်ဘူး။ တကယ့်ကိုအာရုံစိုက်မှုကတစ်စုံတစ် ဦး ကိုပျော်ရွှင်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးသင့်သည်။ အဆိုပါစိုက်ထူလာလိမ့်မည်။
ယခုငါ ၆ လကျော်အတွင်းမည်သည့်ညစ်ညမ်းမှုကိုမှမတွေ့ခဲ့ဘူး၊ ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုလိုသည့်ဆန္ဒလုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုထိုးနှက်နေစဉ်အခြားသူများကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ကော်လာများကြည့်နေခြင်းကိုကျွန်ုပ်မြင်ယောင်ခြင်းသည်ရယ်စရာကောင်းပုံရသည်။ လူတိုင်းအတွက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ရှိကြောင်းသေချာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၌အာရုံစိုက်လိုသောစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ပါနှင့်၊ သင့်ကိုချစ်လိုသူအားအာရုံစိုက်ပါ။ သင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်သည့်အခါသင်၏လိင်တံသည်ပိုမိုသက်ရှိ၊ သဘာဝနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်မှုကိုခံစားရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ထိုအာရုံကိုပေးနိုင်လိမ့်မည်။
ငါများစွာသောသူတို့သိ၏သူတို့ရဲ့ penises အလုပ်လုပ်ရှိမရှိစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်ကိုငါသိ၏။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်တော့လိင်တံကနေစတာမဟုတ်ဘူး။ အလိုအလျောက်စိုက်ထူနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကတကယ့်နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်မသေချာဘူး။ အရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့မည်ဟုသင်ခံစားရရန်အပိုဆုတစ်ခုနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်ရည်းစားကိုရက်အနည်းငယ်မျှမတွေ့ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာငါအလိုအလျောက်စိုက်ထူတာမရှိဘူး။ ငါ့ရဲ့အရင်ပြtroublနာတွေကြောင့်ငါစိတ်ပူမိတယ်၊ ငါထပ်ပြီးဆုံးရှုံးနေတာလား။ ဒါပေမယ့်သူမကိုတွေ့တော့အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။
သူမရဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့အနံ့ကကျွန်တော့်ကိုလှည့်စေပြီးလိင်တံကအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့်သင့်မှာအမြဲတမ်းအပိုဆုကြေး (အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်း) မရှိရင်တောင်မှအချိန်တန်တဲ့အခါအခြေအနေတွေထွက်ပေါ်လာမှာပါ။ ဒါပေမယ့်အရာတွေထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက်စိတ်ဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိဖို့လိုပြီး ဦး နှောက်ရဲ့ဓာတုဗေဒကိုမျှတအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ porn နဲ့ self-stimato လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ လူတိုင်းကိုကံကောင်းပါစေ၊ ရှည်လျားတဲ့ဒီ post မလာခင်, အကောင့်ကို restart
[porn ဖြတ်ပြီးနောက် 10 ရက်ပေါင်း] အရမ်းသဘာဝကခံစားခဲ့ရသောရုံပွေ့ဖက်များနှင့်နမ်းရှုပ် foreplay စဉ်အတွင်းခက်ခဲတယ်။ ငါ porn မှာရှာဖွေနေနုတ်ထွက်ရှေ့မှာဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ နိုင်ပြီ။ ငါသညျလညျးအကြှနျုပျသ porn ထွက်ခုတ်ဖြတ်မပြုမီဒီဖက်နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ရသောအဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက်ပါးစပ်လိင်စဉ်အတွင်းတစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းခြင်း, ရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်မျှစိုက်ထူပြဿနာများကိုစကားပြော။ ငါအချိန်များတွင်အနည်းငယ်ပျော့ပြောင်းပြီးရခဲ့တယျ, ဒါပေမယ့်ကစိုက်ထူပြန်ရဖို့တရားမျှတစွာလွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်။
25 ရက်ပတ်လုံး - ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများနှင့်အတူရှိစဉ်ကကျွန်ုပ်၏ ED သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုဆိုးဝါးစွာခံစားခဲ့ရပြီး၎င်းကိုအမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်စေနိုင်မည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကိုစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုငါနံနက်သစ်သားသည်အလွန်ကြာရှည်စွာအလွန်ခဲယဉ်းပြီးသတိထားမိသည်မှာကြာပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ libido တက်လာသည့်အခါများရှိသည်။ ငါနောက်တဖန် porn ကြည့်ဘယ်တော့မှအပေါ်စီစဉ်နေပါတယ်။
32 ရက်ပတ်လုံး - အသက် ၂၂ နှစ်။ ကျွန်ုပ်သည်အိပ်ရာ ၀ င်ပြီးရေချိုးခန်းသွားရန်လိုပါကကျွန်ုပ်သည် ၁၅ မိနစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်းနေရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၌အကောင်းဆုံးညအချိန်များတွင်စိုက်ထူထားပါသည်။ ငါ့ဇာတ်လမ်းကတခြားလူတွေကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အပတ် ၁၂ - ငါဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုတကယ်သဘောကျတယ်။ ဒါဟာလျစ်လျူရှုရန် kinda ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကငါ့စိုက်ထူတာက Hard Rock နဲ့ Enormous တွေပါ။ ငါအရင်ကသွားခဲ့ကြတဲ့တခြားယောက်ျားတွေကိုသူတို့သတိပြုမိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြန်ခေါ်တာကိုမှတ်မိသေးတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ငါပြန်ရှာပြီလို့ထင်တယ်
လွန်ခဲ့သော ၆-၇ ပတ်ခန့်ကသင်၏BrainonPornကိုတွေ့သောအခါအခြေအနေများစတင်ခဲ့သည်။ ငါအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ဟန်သောအရာများစွာကိုဖတ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတော့ငါပြproblemနာတစ်ခုရှိခဲ့နိဂုံးသို့ရောက်ကြ၏။ ငါ ၁၁ နှစ်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစကြည့်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်အပြစ်မဲ့စွာစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောအစွန်းရောက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းများသို့ကူးစက်ခံရသည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာတဲ့အထိညစ်ညမ်းမှုကကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုရစေတဲ့အရင်းအမြစ်ပဲ။ ငါမိန်းမနှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံရန်ဆန္ဒမရှိခဲ့ဘူး။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်၌လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစတင်ပြုလုပ်သောအခါ၊ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်တွန်းအားပေးသောကြောင့်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါပေါ်ပေါက်လာဖို့ porn အကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ရတယ်။ တကယ်တော့ငါကတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ငါ့လိင်တံယောနိ၏ခံစားမှုမှထုံနေသောဖြစ်ခဲ့သည်။ အော်ဂဇင်ကိုမရောက်နိုင်ဘူး၊ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲငါလိင်ကိုနှစ်သက်ချင်တယ်ဆိုရင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အကျင့်ပျက်ခြင်းကိုလျှော့ချဖို့လိုကောင်းလိုလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကဒါကပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းဝေးကွာသွားခြင်းရှိ၊ မရှိဆိုတာသံသယရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ငါ YourBrainonPorn တှေ့တဲ့အခါငါ porn ကြည့်ရှုရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်အတွင်းငါ့ဦးခေါင်းထဲက fetish porn စိတ်ကူးယဉ်မထားနိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်သည်အထိငါ masturbate မှဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ငါသည်ဤနာလန်ထူရှိလာရုံခံခဲ့ရသည်သဘောပေါက်ဒါကြောင့်ငါမညစ်ညမ်းနီးပါး3ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်အဖြစ်ကောင်းစွာ masturbating တော့ဘူး။ တစ်ပတ်အကြာမှာကျွန်မမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့နှင့်ပိုပြီးအရင်ကထက်နှိုးဆော်ခြင်းခံစားရတယ်။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူအလွန်မြဲမြံစွာနှင့်ငါအလွန်လျှင်မြန်စွာရောက်လာတယ်။ ကျွန်မအကြီးခံစားရတယ်။
ငါနောက် ၅ ရက်လောက်နေပြီးငါသတိမထားမှီတိုင်အောင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဟာစိတ်ကူးယဉ်စရာမလိုဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းပြaနာမဟုတ်သင့်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါနှင့်အတူရှောက်သွား။ လည်းအပြစ်ရှိကြောင်းမခံစားရဘူး။ နောက်တစ်နေ့မှာအမျိုးသမီးအတွင်းခံအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံအနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်။ ငါထပ်ရှာတော့ ၅ ရက်ကြာအရက်မူးသွားတယ်။ အဲ့ဒီ ၅ ရက်အတွင်းမှာငါကြည့်ရတာနာရီ ၄၀ လောက်ကြာတယ်။ ငါတစ်လျှောက်လုံးစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခံစားရတယ်, ဒါပေမယ့်ငါရပ်တန့်နိုင်ဘူး။ ငါတောင်မှ modem အပြင်ဘက်ချပြီးကြိုးစားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးတော့ porn ကိုပိုမိုကြည့်ရှုရန်ကပြန်လည်ရယူနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါအရမ်းတုန်လှုပ်သွားတယ်
ဒီရောဂါမပြန်ခင်ကငါဟာ porn နဲ့လုပ်ခဲ့တာလို့ထင်ခဲ့တယ်။ အရမ်းလွယ်ပုံရသည်။ ငါ့မှာစွဲလမ်းမှုတစ်ခုခုရှိတယ်လို့တောင်သံသယဝင်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးမှလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ ပထမနေ့သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲခဲ့သော်လည်းပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ဒီနေ့နှစ်ပတ်မှာပါ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကငါနဲ့တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ငါအချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်အကြောင်းကိုအကြောက်လွန်ရောဂါဖြစ်သောကြောင့်ငါကြိုတင် masturbated ။ အဲဒီနောက်သူမရဲ့နာရီတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး ၅-၆ မိနစ်အတွင်းမှာပဲအော်ဂဇင်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ငါကြာရှည်ခံချင်တယ်နေစဉ်, အိပ်ခန်းထဲမှာနှိုးဆော်ခြင်း, စိုက်ထူခြင်းနှင့်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းခံရဖို့အလွန်ကြီးစွာသောခံစားရတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အချိန်ဟာအရင်ကထက်မှတ်မိတာထက်တိုတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ငါတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ် porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည့်အခါနာရီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငါထက်နည်း 10 မိနစ်နောက်တဖန်စိုက်ထူခဲ့သည်။
ဒီသက်ရောက်မှုများအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနက် ED ပြဿနာများအားဖြင့်သင်တို့ကိုသူတို့အဘို့အအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြသထင်ပါတယ်။ လိင်တှေ့ဆုံအောက်ပါငါအော်ဂဇင်ပြီးနောက် Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်တစ်ဦး relapse ရှောင်ရှားရန်, ငါ့ခြေချောင်းအပေါ်နေ၏။
[တစ်ဦးပြီးနောက် အကြောင်းကို4လ reboot] ငါအရမ်းပျော်စရာနှင့်ပြင်းထန်မှု၏အခြားညဥ့်နေခဲ့ရသည်။ ယောက်ျားတွေ၊ အဲဒါအကုန်လုံးပဲ။ စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းခြင်း၊ အပြုသဘောဆောင်သည့်အလေ့အကျင့်အသစ်များကိုလေ့လာခြင်း။ အားလုံးရကျိုးနပ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်အရူးအမူးဖြစ်သွားပြီးအလွန်ကြောက်လန့်ခဲ့သည်။ မရှိတော့ပါ။ ယခုစိုက်ထူလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ လိင်အတွေးတွေတောင်မစဉ်းစားတော့ဘူး။ သင့် ဦး နှောက်သည်ပြန်လည်ကျန်းမာလာသောအခါသင်၏လိင်တံကိုအထက်သို့ ဦး တည်သည်။ ယောက်ျားများ၊ သင်လိင်ဆက်ဆံသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်ဤပြissueနာကိုကြုံဖူးကြောင်းမေ့သွားလိမ့်မည်။ လိင်ဆက်ဆံရန်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတားဆီးရန်ကြိုးစားပါ။ ဤသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
[ခေတ် 53] ဒီတော့ဒီနေ့ငါ PMO မပါဘဲရက်ပေါင်း ၃၀ ရှိတယ်လို့မင်းနဲ့တိုင်ပင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါမအောင်မြင်ဘူး ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ မဟုတ်ပါ။ ဒီအတွက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ မင်းထိုင်နေလား ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ညက PMO အစီအစဉ်မစကတည်းကပထမဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့လို့ပဲ။ အဲဒါကိုစီစဉ်မထားဘူး။ သူကအစပြုတယ်။ ဤအရာကိုယူပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဗုံလိပ် ... ED ပြproblemsနာမရှိပါ။
ဒီခရစ်စမတ်အချိန်ဖြစ်ရင်ငါ "ခရစ်စမတ်အံ့ဖွယ်ပဲ" လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ပထမတော့ငါစိုက်ထူမရခဲ့ဘူး ဒါပေမယ့်ငါဖတ်ပြီးသမျှကိုဖတ်ပြီးနောက် karezzaကိုယ့်ကိုယ်ကို "ကျွန်တော်အဲလိုထင်ရင်အဲဒါဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ " မပြဘူးဆိုရင်” ငါ့အချိန်ကိုယူရန်၊ ငါ့ဇနီး၏ဖက်ဖက်၊ နမ်းစသည်တို့ကိုပျော်မွေ့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကာရီဇာအကြောင်းကိုကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးမှတ်မိရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါအော်ဂဇင်ကိုပြု၏။ သူမလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်စိုက်ထူမှုကမအားမလပ်ခဲ့ဘူး။ ဒါဟာခိုင်မာတဲ့နှင့်နေ၏။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဒီဖြစ်ပျက်ဘူး။
သတင်းကောင်းလည်း -“ Wham and Bam” ၁၀ မိနစ်အစားကျွန်ုပ်တို့၏အချစ်ဇာတ်လမ်းသည် ၄၅ မှ ၅၀ မိနစ်သာကြာသည်။ ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ လတုန်းကကျွန်မမှာအကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော့်ဇနီးက 'မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ' လို့မေးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်သူမကိုကာရီဇာလိင်အကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။ သူမသည်ယခုသူကိုယ်တိုင်ဖတ်လိုသည်။ အင်း !!
ကျွန်ုပ်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမကြားရှိစစ်မှန်သော၊ ဘုရားသခင်ပေးသော၊ စစ်မှန်သောလိင်နှင့်ချစ်ခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်၏အမြင်ကိုမည်မျှဆိုးဝါးစေကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သောညများမှကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လိင်မှုကိစ္စကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝမပြုခဲ့လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လူတစ် ဦး အနေနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာခံစားမိလာသည်။ ငါပိုပြီးအလုပ်အမှုကိုပြုတယ်။ ငါဟာဇနီးနဲ့အတူအိမ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးသူမနဲ့အတူအချိန်တွေများစွာကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။ ကွန်ပျူတာကိုဘယ်အချိန်သွားပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်မလဲလိုချင်တယ်၊ မမျှော်လင့်ဘူး သင်၏ဘဝမှ porn ကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်အလွန်လွတ်လပ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၃၀ သည်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သော်လည်းပညာရေးနှင့်အလွန်လွတ်လပ်ခွင့်လည်းရခဲ့သည်။
[တစ်ဦးပြီးနောက် နှစ်လ၏ reboot] သမိုင်း - ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမနှစ်သက်ခဲ့ဖူးပါ။ မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတစ်ခါမှမပြုလုပ်ဖူးပါ။ မကြာခဏဆုံးရှုံးမှုစိုက်ထူအပေါ်တင်ပြီးစိုက်ထူဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ မကြာခဏအတွင်း၌တစ်ချိန်ကစိုက်ထူမှုမကြာခဏဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးည - တောင့်တင်း - con ကွန်ဒုံးကိုထုတ်ယူစဉ်၊ ကွန်ဒုံးတင်ခြင်း၊ လိင်စတင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောချောဆီကိုလိုအပ်ခြင်းကိုရှာဖွေခြင်း၊ ချောဆီအရည်ကြည်ခြင်း၊ စံပြတောင့်တင်းခြင်းနှင့်အတူအားလုံး🙂
ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုသည်အလွန်သဘာဝကျပြီးဖွင့်ထားခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေပြီး၊ မှန်ကန်စွာခံစားခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် shenanigans ကွန်ဒုံးမှတဆင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေမည်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ လိင်သည်ကွန်ဒုံးမရှိဘဲလိင်နှင့်ဆက်ဆံသကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည်။ ... အော်ဂဇင်ကိုယ်နှိုက်ကအလွန်အားကောင်းတဲ့၊ ကျွန်ုပ်စိတ်ပူမိသည့်အရာတစ်ခုမှမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ကောင်းသည့်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမလာနိုင်တော့ပါ။ တကယ်တော့ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုပင်မစဉ်းစားခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်သာမန်အားဖြင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်တူသည်။ ငါရောက်လာသောအခါ, ငါ့ ဦး ခေါင်းပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းနှင့်ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုသွေးကြောများဖေါက်ခြင်းနှင့်ငါ '' FUCKING အပတ် 8 !! ' ငါထင်လိမ့်မယ်တူသောသူမ၏နားရွက်၌။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်လှပပြီးရင်းနှီးသော၊ အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောလိင်ဖြစ်သည်
ဒီနေ့သည် PM နှင့် ၂ လုံးမရှိသောစတုတ္ထအပတ်ဖြစ်သည်။ မနေ့ကငါဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ငါ့ကောင်မလေးနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ တိုးတက်မှုများကိုမှတ်သားထားသည်။ လက်ဖြင့်နှိုးဆွပေးရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ ရငျးနှီး၏ကောင်းသောနာရီ။ ခံစားရတယ်တော်တော်လေးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အောက်တွင်ဆင်းလျောက်ပတ်စွာမြဲမြံစွာခဲ့ပေမယ့်ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တိုးတက်ဆဲ သံသယတွေနဲ့ထွက်ရှိမည်သူမဆိုရုံလမ်းကြောင်းနေဖို့။
[နေ့ ၉၀ ရက်ထက်ပိုသော PM နာရီ - ဤသူသည်အသက်အရွယ်မရွေးလိင်ဆက်ဆံသူဖြစ်ပြီးသူသည်“ ကျိုးပဲ့နေပြီ” ဟုထင်မှတ်ခဲ့သည်။ ရှည်လျားသောပြန်လည် reboot လုပ်ပြီးနောက်သူနှင့်သူ၏ဇနီးတို့သည်အားလပ်ရက်သွားခဲ့သည်။ ] ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့လေးညအတန်းစိုက်ထူဖို့ကိစ္စမရှိဘူး။ ငါသူမကိုခံစားခဲ့ရတိုင်းအချိန်တိုင်း၎င်းသည်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ငါဒုတိယည (နေ့ ၉၃) မှာငါပြောမယ်၊ ငါကရွက်တိုင်မှာရှိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲသွားတယ်၊ ငါတကယ်ပဲစက္ကန့် ၃၀ သာကြာတယ်၊ ဒီမနက်ခင်းမှာအားလပ်ရက်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ။ မနေ့ကငါအတော်လေးသောက်ခဲ့တယ်၊ ငါတတ်နိုင်ခဲ့တယ်မယုံနိုင်ဘူးဒါပေမယ့်ပြproblemsနာမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ငါဟာအောင်မြင်မှုလေးညလေးနက်ပြီးကတည်းကငါပျောက်ကင်းသွားပြီလို့ယုံကြည်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပြသနာသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းပုံစံများပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်ဟုထင်ပါသည်။
ကျွန်တော့်ဇနီးကိုအခြေခံအားဖြင့်အာရုံစိုက်တာဟာစိတ်ကူးယဉ်အတွေးကိုအစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ သူမကအမှန်တကယ်သူမကဒီညလေးညအတွင်းမှာသူ့မှာအဆင်မပြေမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ပြန်လည်နာလန်ထူလာချိန်မှာဒီအချက်ဟာကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ပြီးလူအများစုကဒီကိစ္စကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိခဲ့လို့ libido နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်ပါအချက်အလက်တွေကိုတင်ပြခွင့်ပြုခဲ့ကြပါတယ် - ငါအရင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုခင်ညမှာအဲဒီ့ဘဝကိုသုညခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်စတင်မပေါင်းသင်းမှီတိုင်အောင်ဘဝသည်ထမြောက်လာခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်မင်းမှာခံစားချက်မရှိဘဲလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးလို့ခံစားရရင်တော့ဘယ်နေရာကမှထွက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
[နေ့ 65] ဟုတ်ကဲ့အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်မနံနက်သစ်သားကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ငါစိတ်ကူးယဉ်ရှိပါကအပြည့်အဝစိုက်ထူရှိသည်။ porn ဖြတ်မီ, ငါကျိန်းသေ, ဒီခဲယဉ်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါကြောင့်ကျိန်းသေတစ်ဦးအပြုသဘောစိုက်ထူအရွယ်အစားတိုးနှင့်တန်ဆာရှိ၏။ (အသက် 24)
ကျနော့်သူငယ်ချင်းကကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိပြီးသူနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ယုံကြည်မှုရဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်။ ဒါကြောင့်သူ့ကိုအကြံဥာဏ်အနည်းငယ်ပေးမယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအချို့ကညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သတိထားမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပွင့်လင်းသောယောက်ျားတစ်ယောက် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၌ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ကိုပြောပြရန်ကိစ္စမရှိပါ။ ကျမနောက်ကွယ်ကကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုအကြောင်းအသေးစိတ်တော့မသိသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟုသုတအနည်းငယ်ရှိသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းသည်ကျွန်ုပ်သည် porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများနှင့်ရောနှောခြင်းမရှိသော်လည်းသူသည်ပုံမှန်အသုံးပြုသူဖြစ်ပြီးသူ၏ရည်းစားနှင့်အတူစိုက်ထူခြင်းအခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသည်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုတစ်ပတ်ကြာဖယ်ရှားပစ်ရန်သူ့ကိုပြောခဲ့ပြီးဂယ်ရီ၏ဗီဒီယိုသို့ ဦး နှောက်အပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ငါထင်တာကသူ့ကိုတကယ့်နိုးကြားမှုတစ်ခုပေးခဲ့တယ်။ သူသည် ၉ ရက်တာကိုရှောင်ခဲ့ပြီးဤအချိန်ကတည်းကသူ၏ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ အခုတော့သူဟာသူ့ရည်းစားနဲ့ပြissuesနာမရှိတော့ဘူး၊ လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဟာပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ ငါကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူပြသသကဲ့သို့ငါဒီပုံပြင်ကိုမျှဝေချင်ပေမယ့်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးမှသေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာအပေါ်ခဲ့ပေမယ့်သူကပြန်လည်နာလန်ထူဖြစ်ပါတယ်။
[ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်မ ၀ န်မသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိနိုင်သော်လည်း၊ သို့သော်ဤအမျိုးသမီး၏ရာထူးသည်အားတက်ဖွယ်ဖြစ်စေသည်။ ] ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းကြားဆက်ဆံရေးသည်ယခုမှအလွန်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး (သူ 51 ကြီးနဲ့ကျွန်မ 49 ကြီး) နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သည့်အခါသူကလိင်ကတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူခဲ့ကတည်းကအဲဒီအကြောင်း 11 လအတွင်းခဲ့သညျ။ သူကငါ့ကိုပြောပြတယ်, သူကအရမ်းရယ်ရတယ်ထိုလအတွင်းကယ့်ကိုကောင်းစွာကိုယ်တော်တိုင်သိရန်ဆည်းပူးခဲ့သည်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံတွေအတူတကွသူ့ကိုမနည်းမနောဖြစ်စေခဲ့တယ်၊ သေချာတာပေါ့၊ သူ့စိုက်ထူခြင်းကိုအမြဲရေတွက်လို့မရဘူး။ သူသည် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုစစ်ဆေးရန်အထိပင်သွားနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားတဲ့အခါသူက“ ငါအိုပြီ၊ ပြီးတော့ငါထင်တာကမင်းရဲ့နောင်နှစ်တွေမှာလိင်မှုကိစ္စဟာငါကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲစသည်ဖြင့်ဆက်ဆံရတာပဲဖြစ်တယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အလွန်လျှင်မြန်စွာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူစတင် karezza နှင့် tantra ယခုဤလူသည်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး နှင့်တူသည် (သို့သော် ပို၍ ကောင်းသည်၊ သူသည်အာဏာဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်း - ဤတွင်ကျွန်ုပ်ထိုင်နေသည်မှာ karezza lovemaking တွင် ၅ နာရီကြာပြီးသော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်စာရိုက်နေခြင်းဖြစ်သည် - မည်သူသည်ဤကောင်းမှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းမည်သူသိသနည်း။ ?) ။ အဲဒီအစောပိုင်းကာလတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ခက်တယ်၊
သငျသညျ DE (နောက်ကျသုက်) ရှိသည်နှင့်ငါအဖြစ်ကောင်းစွာတူညီတဲ့ပြဿနာရှိသည်။ လိင်စဉ်အတွင်းအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ခြင်းငါက Google ရှာဖွေနေနှင့် YBOP နှင့် NoFap ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာတက်အဆုံးသတ်အဘယ်ကြောင့်အများအပြားအကြောင်းရင်းများတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ (ချည်ရန် LINK)
ငါထို့နောက်ငါမိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ဆို PMO လုပ်နေစရာမလိုဘဲ 90 ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုသွားလေ၏။ ကျနော်တို့လိင်အကြိမ်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပေမယ့်နေဆဲပြဿနာတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲဒီနောက်နေ့က 98 အပေါ်ငါဖြစ်ချင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. အစဉ်အမြဲငါငါလိင်ရှိသည်4ကြိမ်နဲ့ကျွန်မလိင်စဉ်အတွင်းပျော့သွားပါကအခြား3ကာလ၌တစ်ဦးအကြောင်းကိုအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ငါသော်လည်းပျော့သွားနှင့်သူမတစျခုလုံးအရာနှင့်အတူအလွန်မင်္ဂလာရှိ၏ရှေ့၌ငါအတော်လေးတစ်ဦးအနေဖြင့်နောက်ဆုံးမှ။ ငါပျော့သွားရပါဘူးရှိရာကြိမ်ငါ 15 မိနစ်အကြာတွင်နောက်တဖန်ခက်ရသည်နောက်တဖန်လိင်ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁၈ ရက်ကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊ တခါတရံမှာငါတောင်မှစိုက်ထူခြင်းတောင်မရရှိနိုင်ဘူး၊ ငါလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့အများကြီးကွာခြားတယ်။ ဒါဟာအလွန်အမင်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ စိတ်ရှုပ်စရာတစ်ခုလြော့ပေါ့ခနျမှနျးခကျြရှိ၏ ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အဝမကုသနိုင်သေးပါကကျွန်ုပ်သည် reboot သံသရာ၌လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစတင်ပါ ၀ င်ပါ့မလားဟုတွေးမိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အလွန်ပျော်ရွှင်မိသည်။ 🙂
အောင်မြင်မှုသော့ဖွင့်ပြီး ED သို့မဟုတ် DE မျှနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံကျေနပ်
ဒီမတိုင်ခင်ငါကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာမတူညီတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့ခဲ့တယ်။ သူမသည်အလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မားသောနားလည်မှုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော၊ နောက်ဆုံးအကြိမ်အနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တစ်ယောက်မှမလာခဲ့ပါ။ ဒါ့အပြင်တစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး အပြန်အလှန်ချစ်ဖို့မသေချာမရေရာတဲ့အတွက်အချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အေးဆေးစွာနေခဲ့ကြရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ညကအလွန်ကွဲပြားခြားနားခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားမိန်းကလေးနှင့်ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်ပိုမိုကြီးမားသောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုကြောင့်၎င်းသည်မည်မျှရှိသည်ကိုတွေးမိသည်။ သို့သော်သိသာထင်ရှားသည့်အချက်မှာ nofap သည်ခြင်္သေ့၏ဝေစုကိုရထိုက်သည်။
Nofap သမိုင်း - ၆၇ ရက်ကြာ ၆ ရက်အကြာမှာငါချိန်းတွေ့ခြင်းမခံရတော့ရင် ၁၀ ရက်တာ Streak ကိုချက်ချင်းငါ့လက်ရှိ Streak မတိုင်ခင်မှာ။
ရုံ ED ခံစားနေရပြီးယောက်ျားတွေသိစေရန်ဤ post ကိုဖန်ဆင်းတော်: ကပိုကောင်းရပါဘူး !!
ပြီးသားပိုကောင်းစိုက်ထူ (~ 25 ရက်)
NostawS မှ 13 နာရီagoတင်ပြခဲ့သည်27 ရက်ပတ်လုံး
ဒါကတော်တော်လေးအေးတယ်၊ ငါ့စိုက်ထူတာကပိုပြည့်စုံတယ်၊ အားကောင်းတယ်၊ ငါဆိုလိုတာကမင်းကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ငါဟာအဲဒါကိုခက်ခက်ခဲခဲ 'အတင်းအကျပ်' မလုပ်ဘဲခက်ခဲစွာနေနိုင်ပါတယ် ပုံမှန်အားဖြင့်ငါစိုက်ထူထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်သွေးစီးဆင်းမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ငါ့လိင်တံကိုတင်းကျပ်ဖို့ရှိသည်, ထိုစိုက်ထူနေဆဲဖြစ်ကောင်းသာ 75% ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်သော်လည်း။
ယခုငါအသည်းအသန်တက်နိုင်ပြီး၎င်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းပင်ဖြစ်နေသည်။ ၎င်းသည် 'ဖြေလျော့ပေးခြင်း' နှင့်ငါ့ကြွက်သားများတင်းမာခြင်းမရှိသော်လည်းလေဖြတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
တော်တော်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေတာတော့ရက်အနည်းငယ်လောက်တော့မကောင်းဘူး (တစ်ခါတစ်ရံမှာသူကအရင်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဖူးတာပါပဲ) ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့ကိုတိုးတက်နေပြီးဆက်သွားဖို့လှုံ့ဆော်ပေးနေသည်။ ဒါကအားလုံးသက်ဆိုင်ရာလျှင်ငါ 21 နှစ်ရှိပြီ။
NoFap ၏သာလျှင်တစ်ခုမှာအပတ်ပြီးနောက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လိင်! ပညာရေးကိစ္စများနှင့်အတူသူတို့အဘို့ကောင်းမွန်သောသတင်း။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအသက် ၄၆ နှစ်ရှိပြီ။ ငါထင်သောအရာအတိအကျ 18-24-3 နေဆဲနှင့်သူ၏ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်" ၌နေသောဒီမှာယောက်ျားတွေအများစုဖြစ်ပါတယ်။ ငါ PMO'ing လွန်ခဲ့သော7နှစ်ကတော်တော်လေးအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့သည်, ဤအသိုင်းအဝိုင်းထံမှရရှိသောထောက်ခံမှု၏ကျေးဇူးတင်စကား, ကနေ3ရက်ကိုချွတ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်၏လိင်စွမ်းရည်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်ကိုကြည့်ပြီး ED ပြissuesနာများသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ဒါကိုစို့တယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာငယ်ငယ်တုန်းကကြုံခဲ့ရတဲ့ကျောက်မာတဲ့သစ်သားနဲ့ဝေးတယ်။
၇ ရက်နေ့ (မနေ့က) ငါပြန်လာမိတယ်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်ညက New Year ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၏မိန်းကလေးကအလိုရှိသည်။
သူမငါ့ကိုနမ်းလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်“ ပုံမှန်” ဟုထပ်မံခံစားမိသည်။ သူမကသူမထိတာကိုချက်ချင်းရပ်ပစ်လိုက်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ထိုးခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်လုံးလုံးစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ့်ကိုအဆင်မပြေတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်တစ်ခဏသာရှိခဲ့ပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြန့်ကျဲသွားပေမယ့်ချက်ချင်းပဲပြန်ရောက်သွားပြီးပြန်လည်တည့်မတ်သွားပြန်သည်။
ပြီးတော့ငါတစ်ပတ်တည်းသာပါ။ ႏွင့္ မနေ့ကငါပြန်ရောက်သွားတယ်။
ငါအရင်ကရှိခဲ့ရင်ငါပို။ ပင်ငါပေါ့။ ဒီအလုပ်ဖြစ်တယ် အကြှနျုပျ၏ဒစ်ပြီးသားအနာရောဂါငြိမ်းစရာဖြစ်ပါတယ်။ ငါမျှော်လင့်အတိအကျအဘယ်အရာကို။
TL / DR: NOFAP ကိုစတင်ပြီးတစ်ပတ်အကြာမှာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးအရမ်းအံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။ မနေ့ကနေ့ ၇ ရက်နေ့မှာပြန်သွားခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော့် ED ပြissuesနာတွေကိုရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ဘူး။ heck!
ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံပါ။ ရက် ၃၀ ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ ၁ ပတ်ကြားဖြတ်တာထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ sensitivity ဟာအသက်အရွယ်ကနေပြန်လာပြီလို့ပြန်ထင်ခဲ့တယ်။ ငါနေရာတော်တော်များများကိုပြောင်းရတယ်။ ငါကများသောအားဖြင့် deflating ဖြစ်ရပ်သောအဆုံးဆီသို့ကွန်ဒုံးကိုတင်၏။ သူမမှာလည်းအချိန်များစွာရှိသည်။ ငါပုံမှန်ထက်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ငါအဘယ်သူမျှမ fap အပေါ်အနည်းငယ်အပြာရောင်ခဲ့ပေမယ့်အဲဒီရလဒ်တွေကိုမြင်ပြီးနောက်ငါခွန်အားငါဖြစ်၏။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးမှပထမဆုံးလိင် - ရက် ၅၀
အကြမ်းဖျင်း 50 ရက်ပေါင်းအတွက်နောက်ဆုံးညဥ့် nofap စတင်ကတည်းကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့လိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တည်းခိုစိုက်ထူ, တရားဝင်စိတ်ဝင်စားခဲ့အများကြီးပိုရှည်ကြာခဲ့သည်။ သို့တိုင်သွားရမယ့်နည်းလမ်းတွေအများရှိသော်လည်း, ငါအရှင်ဝေးတော်တော်လေး psyche ဖြစ်၏။
ငါ့အတွက်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏကြည့်ရှုခြင်း၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုအစွန်းရောက်လာခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများသည်နေ့တိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးရည်းစားအစစ်အမှန်ကိုရရှိပြီးပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကကျွန်ုပ်ကိုခက်ခဲစွာမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။ သို့သော်ယခုငါသူမနှင့်အတူခဏနေခဲ့ရပြီ ဖြစ်၍၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်တိုင်းလိင်ဆက်ဆံကြသည်။ ငါမလိုအပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ porn သို့မဟုတ် fap ကြည့်ဘယ်တော့မှ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုသင်ဖြတ်သန်းပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ စစ်မှန်သောလိင်သည်မည်မျှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
အလေးအနက်ထား, ကအကြီး fuck ဆိုတဲ့ပါပဲ။ ညစ်ညမ်းမှုကိုရပ်တန့ ်၍ ရနိုင်သည့်ရည်းစား / ရည်းစားကိုရှာပါ။ http://www.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/1956bs/eli5_why_porn_is_bad_for_me/
ဤသည် nofap အလုပ်လုပ်! အလေးအနက်ထား။ ၂ ပတ်ကြာပြီ။
ဒီ site နှင့် yourbrainonporn.com ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ပြန်လာပြီး၎င်းကိုနှစ်သက်သည်။ nofapping ကို to ၀ ံဂေလိတရားဟောပြောရန်ယခုကမ္ဘာသို့ကျွန်ုပ်သွားနေပါသည်
ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခဲ့သူ၊ နှစ်ဆယ်လေးဆယ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်တုန်းကအင်တာနက်မရှိသေးသောကြောင့်မဂ္ဂဇင်းကိုစတင်ခဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ ဤနေရာနှင့်အခြားနေရာများတွင်ပါသောအကြောင်းအရာများကိုဖတ်ရှုခြင်းသည်၎င်းသည် reboot လုပ်ရန်လိုအပ်သောအချိန်နှင့်ခြားနားမှုရှိပုံရသည်
ဘာလို့ reboot လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်၊ ငါအကူအညီတောင်းဖို့တုန်လှုပ်သွားတယ် ED နှင့် DE ရုတ်တရက်စတင်ခြင်း။ ငါကွာရှင်းပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာ (စိတ်ကျရောဂါ) ပြီးနောက်မည်သည့်အမျိုးသမီးကိုမျှမတွေ့ခဲ့သောကြောင့်မည်မျှဆိုးရွားကြောင်းကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကျွန်မအိပ်ရာခင်းပေးဖို့ရှာတဲ့အခါငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ Yikes! သူမသည်အလွန်စိတ်သောကရောက်နေပြီးပြသနာကိုနားမလည်နိုင်ပါ။ ... ငါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး
ငါဒီ site များနှင့် yourbrainonporn.com ပေါ်သို့လဲခင်မှာငါ ED ကိစ္စများအဘို့ဖြောင့်ဆရာဝန်ထံသို့သွားလေ၏။ Viagra များအတွက်ဆေးညွှန်းနှင့်အတူပျော်ရွှင်အဲဒီမှာထဲကသွားလာ၏။ porn (!!!) ကို အသုံးပြု. ချက်ချင်းကကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်ရလဒ်နှင့်အတူပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးနှင့်အတူ Next ကိုအခွင့်အလမ်း, ငါစိုးရိမ်ပေမယ့်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ်, Viagra အလုပ်လုပ်တယ်, ကောင်းသောခံစားရတယ်။ သို့သော်ထိုသို့ထို့နောက်ငါသည်လည်း DE ခဲ့သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ တပါးသောဘုရားကို ထောက်. , နောက်ထပ်အလေးအနက်ထားချွတ် pissed နှင့်စိတ်ပျက်အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတစ်။
အဆိုပါ nofap က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် Youtube ကိုအပေါ်တစ်ဦးကယ့်ကိုအသုံးဝင်တဲ့စီးရီးနှိပ်ပါ။ အဆိုပါညွှန်ကိန်းများအားလုံးရှိကြ၏။ အကြှနျုပျ၏ Doc ကိုယ်ထိလက်ရောက်ငါကျန်းကျန်းမာမာကပြောပါတယ်, ငါအမာခံ porn နှင့်အတူအရာအားလုံးကိုဒဏ်ငွေခဲ့သောကြောင့်စက်ယန္တရားအလုပ်လုပ်ခဲ့သိတယ်။ Bing မှ! Light ကကမ္ဘာလုံးငါဆိုဒ်များကိုဖတ်ရှုခြင်း start သည့်အခါအပေါ်တတ်၏။
တစ်ခုခုပြောင်းရတော့မယ် ဒါကြောင့်ငါ reboot စလုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးပတ်အတွင်းသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့အားလပ်ရက်တွေ။ ရေးထားတာတွေအများကြီးကိုရေးထားတာကြာတော့ ၃ ပတ်လောက်မကြာသေးဘူးလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ သို့တိုင်အစပြုရန်ပိုကောင်းသည်။
လွန်ခဲ့သော2ပတ်ကကျွန်ုပ်စတင်ဖွင့်လှစ်သည်အထိကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းမသိခဲ့ပါ။ ပထမအပတ်ကသည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ သစ်သား (ED) နဲ့လမ်းလျှောက်နေရင်းကျွန်တော်မခံနိုင်လောက်အောင်ချိုနေတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့တွန်းအားကမထိန်းချုပ်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ တကယ်တော့ငါအဲဒါကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကအင်အားကြီးမားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာကိုငါဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်သင့်ရဲ့ 'အခြား' လက်ကိုသုံးပါ။ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ဖို့၊ မကြည့်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်၊ ငါကကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတချို့လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ နှစ်ပတ်အတွင်း၎င်းကိုလေးလေးနက်နက်ကြိုးစားပြီးလေ့လာခဲ့သည်။ အနားသတ်သည်စကားလုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် DE လည်းရှိခဲ့သဖြင့်အော်ဂဇင် (porn မပါဘဲ) မရနိုင်ပါ။ ငါ downloads တွေအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ။ ခံစားချက်တွေကိုမကူညီပေမယ့်ငါတစ်ခုခုကြိုးစားခဲ့ရသည်။ ရှေးရှေးသူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်မည်သည့်လမ်းအတွက်လျှင်ဤအမှုကိုမပြုကြရန်အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဒုတိယပတ်အစတွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံမှသုတ်ရည်များယိုစိမ့်နေပုံရသည်။ တကယ်တစ် ဦး ကယ့်ကိုလိုက်တယ်အာရုံ။ ဒါဟာဆီးမဟုတ်ခဲ့, ကျိန်းသေ Pre-cum ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယရက်သတ္တပတ်အကုန်အထိငါနဲ့အတူနေခဲ့ရတယ်၊ ငါချက်ချင်းရေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်သာအဆုံးသတ်ခဲ့တာပဲ
ဒုတိယပတ်အစမှာနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ဒီညစ်ညမ်းမှုပြproblemနာကိုမခံစားရသူအားလုံးအတွက်ထူးဆန်းနေလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကမိန်းကလေးတွေကိုခဏတာသတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကသူလိုချင်တာအားလုံးလိုချင်တာနဲ့တခြားနေရာကိုလိုချင်နေတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စတင်ခဲ့သည် အမှန် မိန်းကလေးများကိုသတိပြုမိခြင်းနှင့်သူတို့နှင့်အတူရှိနေခြင်း၏တီထွင်မှုနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရန်အလွန်စိတ်သောကရောက်နေခြင်း🙂စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ မိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်လိုသောဆန္ဒသည်ကျွန်ုပ်အားနှစ်ပေါင်းများစွာအလွန်လိုအပ်ခဲ့သော်လည်းအားမထား၊ လုပ်ရန်။ သီတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်ပေါင် ၂၀ နီးပါးကိုသွန်းပြီးကြွက်သားနှင့်အဓိပ္ပါယ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဒါက nofap အတွက်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါက fapping ကခင်ဗျားရဲ့ယောကျာ်းလေးကိုနိုးထစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာပါ။
ဒါကြောင့်ငါ reboot စပြီးနှစ်ပတ်အကြာမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ ED နဲ့ DE နှစ်ခုစလုံးနဲ့အတူငါဟာနောက်ထပ်ရှုံးနိမ့်မှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်လိုက်တာပဲ။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီဖို့ ၂၅ မီလီဂရမ် (ပုံမှန်အဆင့်မြင့်ဆေး ၁၀၀ မီလီဂရမ်) သာ Viagra ကိုသောက်ခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ, Viagra အများစုအစိတ်အပိုင်းအတွက် ED ဂရုစိုက် ... ဖြစ်ကောင်းလွှမ်းမိုးသော ဦး နှောက်အာရုံကြောစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်ပြissuesနာများ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာ ok ။ ထိုအခါအကျွမ်းတဝင်ပုံစံ .. DE ... yikes! ဒီတော့စိတ်ပျက်မိတယ်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ရှုပ်စရာမဖြစ်၊ နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆုံးမှာအလွန်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မရှိဘူး။ ကျွန်မအရမ်းပျော်တယ်၊
ဤအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ရရှိသောအကျိုးအမြတ်များကိုစမ်းသပ်ရန်အခြားအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်အခက်အခဲအချို့ကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ယခုပြန်အပြည့်အဝ function ကိုမှသတင်းပို့နိုင်ပါတယ်။ Sensitivity ကိုပြန်ရောက်သွားပြီ။ ဘုရားဟာငါအရင်ကဒီလောက်ကျဆင်းသွားတာကိုသတိမပြုမိပုံကိုသိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်မှာ PE hehehe hahaha ရှိပါသလား။ ဒါပေမယ့် DE ကိုတစ်နေ့လုံးငါယူမယ်။
ငါထင်တာကတော့မကြာခင်မှာငါ Viagra ကိုလုံးဝဖယ်ရှားဖို့ယုံကြည်မှုရှိလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ရှေးရှေးပါပဲ။ အခြားဘာသာပြောင်း ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမဆိုညစ်ညမ်းရုပ်ကိုဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘူး။ ၎င်း၏ရုံမထိုက်တန်။ မီဒီယာတွင်အပျော့ညံ့သည့်အလုံအလောက်ရှိနေသည်၊ ခက်ခဲသောအရာများသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုမည်သည့်အရာကမျှအကျိုးမပြုပါ။
ဧပြီ 07, 2013
နေ့ 125 မျှ Porn / နေ့ 28 မျှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ / နေ့ 21 မျှ orgasm
ဒါကြောင့်flatရာမပြားချပ်ချပ်ထဲမှာရှိနေတုန်းပဲ ED မကောင်းသေးဘူး။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလေဖြတ်ခြင်းနှင့်ပါးစပ်မှခက်သော်လည်းရနိုင်သော်လည်းမိန်းကလေးများနှင့်မိတ်ဆုံသောအခါသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်မှာနူးညံ့သောထိတွေ့မှု၊ နမ်းရှုပ်မှု၊ စိုပြေစူးစိုက်မှုစသည့်စိုက်ထူခြင်းကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု / လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုမီလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီ
ဒါကြောင့်တော်တော်များများငါ4လအတွင်းအဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုခဲ့ကြသည်။ မျိုးသူကဖတ်နေအသစ်သောလူတို့အဘို့တားပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ရင်ဆိုင်ရဖို့လိုတယ်, သင့်ငယ်ရွယ် + ED လျှင် 90 ရက်ပေါင်းထို့နောက်တဖန်မလိုအပ်နိုင်ပါသည်တစ်ဦးကြမ်းတမ်းအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်။
ပိုများသောအပြုသဘော4months ago porn ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအမေသာတစ်ဦး 80% စိုက်ထူရနိုင်, ယခုဈင်း၏ရှိလာပြီဒီတော့ဆွကနေညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ 100% ခက်ရ။
ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဈပြန်သွားဖို့အမြိုးသမီးမြားနဲ့ငါ့လိင် Drive နှင့် arousal အဘို့အထင်အခြား 4-6 လအတွင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အိုကေ၊ ငါ ၁၂-၁၃ နှစ်တုန်းက porn ကိုစကြည့်ခဲ့ပေမဲ့အသက် ၁၅ နှစ်မပြည့်ခင်အထိမကောင်းဘူး။ ငါနေ့တိုင်း 12 ကြိမ်သို့မဟုတ် 13 ကြိမ် porn နှင့်အတူ fapping စတင်ခဲ့သည်။ အသက် ၁၆ နှစ်မှာအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ၂ မိနစ်လောက်ကြာအောင်ကြိုးစားပြီးငါ့လိင်တံကငါ့ကိုပဲသေစေခဲ့တယ်။ ငါမှာပြproblemနာရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့တခြားမိန်းကလေး ၅ ယောက်လောက်ကိုယူခဲ့တယ်။ ဒီတော့အခုကျွန်မအသက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီ၊ ဒီမိန်းကလေးနဲ့ကျွန်တော် ၃ လနေခဲ့ပါပြီ မနေ့ညကကျွန်တော်တို့တော်တော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွားတယ်။ ကျွန်မတို့မှာလိင်ကိစ္စမရှိခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကလုပ်ခြင်းနဲ့ကြိတ်ဆုံလုပ်ခြင်းပဲ။ ဒီလောက်ကြာအောင်ငါဘယ်လိုနေခဲ့ရသလဲဆိုတာကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်။
အိပ်မက်မက်နေသလိုခံစားရတယ် !! ဒီတော့ဟုတ်ပြီ၊ ဒီနေ့ထိတော့ငါ့ဘ ၀ ဟာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ငါ့ဘဝကိုအကြီးအကျယ်မပြောင်းလဲစေဘူး။ ငါအရမ်းပျော်တယ်။ ငါဒီဘဝပုံစံကိုဖန်တီးတယ်၊ ငါတစ်ခုလုံးအဖြစ်ပိုကောင်းခံစားရ! ဒီတော့ဟုတ်ပြီ၊ ငါကောင်းကောင်းပြန်ဖွင့်နေပြီ၊ ငါ 90+ နေ့ကိုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်၊ ​​ပြီးတော့ဆက်လုပ်သွားမှာပါဒါပေမယ့်ငါခြေရာခံမှာမဟုတ်ဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၄ ရက်က NoFap ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန် ED ပြproblemနာတစ်ခုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးအလွန်အားစိုက်ထုတ်ခြင်း၊ ငါအအေးကြက်ဆင်ခဲယဉ်း mode ကိုသွား။ - အဘယ်သူမျှမ porn, edging မရှိလိင်။ ထိုအခါငါငါသုံးပတ်ခန့် flatlining ခဲ့ - ဤကာလအတွင်းစိုက်ထူ၏လုံးဝလက္ခဏာမ။
မနေ့ကငါမမျှော်လင့်ဘဲဟောင်းတစ်ဦးရည်းစားနှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မနည်းနည်းစိုးရိမ်ခဲ့ပေမယ့်တကယ်တော့သူကကောင်းကောင်းသွား၏။ ငါခဏရပ်၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူတစ်နာရီကျော်ကြာမြင့်နှင့်, စိုက်ထူငါ့ကိုသဘာဝလမ်းအတွက်အလွန်အားကောင်းတဲ့အော်ဂဇင်ရှိသည်ဖို့အတှကျလုံလောကျခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ကျိန်းသေ% ပြန်လည်နာလန်ထူ 100 မဟုတ်ပေမယ့်အတိတ်3နှစ်အတွင်းဘယ်အချိန်မဆိုထက်လမ်းကောင်း၏။
သငျသညျ porn အပေါ်စတင်ခဲ့ပြီးဘယ်လောက်စောစောပိုင်းအသက်တာ၌ပေါ် မူတည်. အဆိုပါ reboot 2-8 လမှဘယ်နေရာမှာမဆိုယူစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ ရုံလူနာဖြစ်နှင့် porn နှင့် edging အကြောင်းကိုအလွန်တင်းကျပ်စေသတည်း။ ကံကောင်းပါစေနှင့်ခိုင်ခံ့သောနေဖို့။
Rewired, ပြန်လည်မွေးဖွား, Rebooted- သင်ကပဌနာကဘာလဲဆိုတာမည်သို့ပင်, နေနောက်တဖန်ထွန်းလင်း !!
အံ့သြစရာကောင်းတာကတော့ PMO မပါဘဲ ၂ ပတ်ကြာပြီးနောက် ၂၃ နှစ် "သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း" ဖြစ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်သည်ဤတနင်္ဂနွေကိုကျောက်တုံးများနှင့်ကြိမ်ဖန်များစွာလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကစာသားကျိုးသွားသည်ဟုခံစားခဲ့ရပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ Nope PMO ထံမှအနည်းငယ်သာအချိန်။ ငါစွဲနေခြင်းနှင့်အတူနှစ်နှစ်ခန့်ရုန်းကန်နေခဲ့ရသော်လည်းတဖြည်းဖြည်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏အသုံးပြုမှုကိုဖြတ်တောက်ခဲ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်ပြောသင့်သည်။ ငါ PMO ရဲ့ပြီးခဲ့သည့်အချိန်အကြောင်းကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်။ ဒါပေမဲ့လိင်တူချင်းချစ်တာကသူမကိုပြန်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ သင်အမှန်တကယ်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိချင်တယ်? ငါပြောမယ်၊ မင်းကကုန်ကျမယ် သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏အချိန်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးသင်၏လက်၊ ဝီလီလိုနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုရပ်တန့်ပြီးအသက်ရှင်သောဘ ၀ ကိုသွားရန်လိုအပ်သည်။
ပထမ ဦး စွာ၊ ဂျာနယ်တစ်ခုစတင်ပါ။ နေ့စဉ်စာရေးရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ သို့သော်မကြာမီသင်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
ဒုတိယအချက်အသင် (အမှန်တကယ်ငါဆိုသည်ကားသငျ့သညျကိုခစျြတ) ကိုချစ်ဘယ်အရာကိုသင်ယူ; ဂီတ, ရုပ်ရှင်, စာဖတ်ခြင်း, စာရေးခြင်း, roller Blade, ဂေါက်သီး, ဘတ်စကက်ဘော, ခရီးသွားလာတောင်စက်ဘီး, စတာတွေကြောင့်လုပ်ပေးသွားပါ။
တတိယအချက်အနေဖြင့် libido တိုးမြှင့်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုမေ့ပါ။ သို့မဟုတ်ထိုကိစ္စအတွက်သင်ဖြည့်စွက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ (အကယ်၍ သင်၏အသက် ၄၀ နှစ်အောက်ဆေးကုသမှုအခြေအနေမရှိလျှင်) နှင့်သင်၏လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ကွန်ဒုံးအလုံအလောက် ၀ ယ်ပါကထွက်သင့်သည် CVS တွင်ကွန်ဒုံးများ ၀ ယ်ရန်မနက် ၅ နာရီတွင်။ တစ် Bummer ၏ကြင်နာ။
မင်းရဲ့ဝီလီကဘယ်လိုသီချင်းဆိုရမလဲဆိုတော့ဘာမှမပူပါနဲ့။ Bro23 သည်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်ထုတ်စစ်ဆေးခြင်း။ ကံကောင်းပါစေယောက်ျားတွေနှင့်အရက်ဆိုင်များ၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်! PS PMO တွင်ပါဝင်ခြင်းသည်သင်၏စေတနာစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးရုံသာမကသင်မြင်သောပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးတိုင်းနှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံမိစေသည်။
စွမ်းအင်တက်လာတယ်၊ တက်ကြွမှုတက်လာတယ်။ ဤအရာအလုံးစုံ PMO အရာပြီးနောက်ရှိသမျှတို့ boloney မဖြစ်ရ! BTW- PMOing မဟုတ်သည့်နေ့ရက်များကိုမမေ့ပါကယူရန်ခဲယဉ်းပေမည်၊ သင်၏နောက်ကျောလာသောအခါသင်သိပါလိမ့်မည်၊ တစ်ပတ်နှစ်နှစ်ရှိပါကအရေးမကြီးဟုခံစားမိသည်။ အောင်မြင်မှုသည်အခြားသူများအားလွှတ်ပေးပြီးနောက်တွင်အဓိကအားဖြင့်ချိတ်ဆွဲထားသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ - ဝီလျံ Feather
60 နေ့က Streak, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအောင်မြင်မှု
ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်သည်ကွန်ဒုံးဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်၊ ၇-၁၀ မိနစ်ကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသော ၁၀၀% ခက်ခဲသောစိုက်ထူမှုဖြင့်ဖြစ်သည်။ (ငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအော်ဂဇင်မပြုခဲ့, ငါ reboot လုပ်မခံစားရမှီတိုင်အောင်အဘယ်သူမျှမအိုကပ်နေပါတယ်) ငါ 100 နှစ်ဖြစ်၏, ဤငါပြုပြီးပြီပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကကျွန်တော်ဟာမခဲယဉ်းခဲ့ဖူးဘူး၊ ~ ၀ င်ခွင့်စက္ကန့် ၃၀ အတွင်းမှာဖြစ်စေ၊ ငါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကစတင်ခဲ့သည်။ ရက်ပေါင်း ၆၀ သည်ကျွန်ုပ်၏အရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့နောက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အလုပ်များမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် MO'ing သို့ပြန်သွားပြီးအစောင့်အကြပ်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးဟာမကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်တွေပါ၊
ထိုစဉ်ကကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ရာထူးရှိယောက်ျားများအတွက်ရှည်လျားသောအိုလွတ်လပ်ရေးတစ်ခုလိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်မိသည်။ ငါ ၉ တန်းကျောင်းသားဘ ၀ မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစတင်ခဲ့တယ်၊ ငါကိုယ်ပိုင်အခန်းရတဲ့အခါတတိယနှစ် (အသက် ၂၀) တက္ကသိုလ်မှာပိုပြီးသုံးခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါစိုက်ထူပြproblemsနာများကိုသတိပြုမိလာတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအသက် ၂၂ နှစ်တွင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး ED ရှိခဲ့သည်။
ငါမပျောက်သေးဘူး နမ်းရှုပ်နေရင်းနဲ့ငါနင့်ကိုမကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သူမအနားမှာလဲလျောင်းရင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနည်းငယ်ထိမိပြီးအရာရာလှုပ်ရှားလာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ကျွန်တော်သူမကိုပြခဲ့တယ်၊ သူမကကျွန်မကိုထိမိပြီး ၁၀၀% ခက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးကတော့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်ငါ့ကိုခက်ခဲစေသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲ ၁၀၀% စိုက်ထူမှုကိုရနိုင်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရောဂါပျောက်ကင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ဤသည်မှာသော်လည်းတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက, ကအဓိကတိုးတက်မှု။ Long ကလိင်, အပြည့်အဝစိုက်ထူမရှိ, PE ။ အလွန်ပျော်ရွှင်။ ရုံကယောက်ျားတွေနှင့်အတူကပ်။
ps ဒီမှာကျွန်တော့်ဂျာနယ်ပါ။ ဒီဟာကိုငါတို့လက်မှတ်တွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲ။
NoFap ငါ၏အ ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ
သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုထပ်ပေါင်းထည့်ရန် - ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ED နှင့်အတူရုန်းကန်နေခဲ့ရသည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည့်အချိန်ကာလအများစုသည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်ရောက်သောကြောင့်ယင်းကိုငါကအရက်ဟုသတ်မှတ်သည်။ ငါတကယ်စိတ် ၀ င်စားပြီးသမ္မာသတိ ရှိ၍ မထနိုင်သည့်အထိမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်အထိ၎င်းသည်ပြaနာဖြစ်သည်ကိုမသိခဲ့ပါ။ ငါကအားနည်းချက်တွေနဲ့ခံစားခဲ့ရတယ် အဲဒီနောက်ကျွန်တော်နားလည်လာပြီးပြandနာတစ်ခုဆိုတာလက်ခံလာတယ်။ တိုတိုပြောရရင်နောက်ဆုံးမှာ NoFap ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကငါမှတ်မိခဲ့တဲ့စိုက်ထူမှုမျိုးကိုငါရလာကတည်းက ဒါဟာငါ့အတွက်ကမ္ဘာကိုဆိုလိုသည် ဒီတော့ဒီမှာမင်းအတွက်ပါ
ငါ Omegle ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငါတကယ်ဂူဂဲလ်လုပ်ရမယ်။
ဒီနေ့ကစပြီးမင်းရဲ့ချစ်သူကောင်လေးကိုသိကျွမ်းလာပြီးသူမကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းချစ်လာမယ်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာသူမအပေါ်ချစ်မြတ်နိုးလာမယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ “ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျဆင်းခြင်း” သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်နိုင်ပြီးအနှစ် ၇၀ လက်ထပ်စဉ်ကသူသည်ကျွန်ုပ်၏အဘိုးအမကိုအမြဲချစ်မြတ်နိုးကြောင်းအဘိုးအဘွားကပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာနှစ်ရှည်လများနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် LOVE ဟာကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုပေးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော့်အတွက် (အသက် ၃၀ ထက်ပိုကြီးတဲ့) အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ် ဦး မှာ ED ရနိုင်တဲ့အကြောင်းဖတ်ရတာကောင်းပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၉၂ ရက်က ED သည်ကျွန်ုပ်အသက်အရွယ်တွင်လက်ခံရမည့်အရာဟုထင်နေသည်။ ဒါပေမယ့်အခု ၉၁ ရက် nofap / noporn (နှင့် nmostx allmost) ပြီးနောက်ငါအတော်လေးအကောင်းမြင်ပါတယ်။ ဒီမနက်ခင်းမှာအိပ်ရာထဲမှာလဲလျောင်းနေရင်းနဲ့ကြာရှည်တည်မြဲတဲ့မနက်ခင်းသစ်သားစိုက်ခင်းကိုတစ်နာရီခန့်ကြာအောင်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်မတ်တပ်ရပ်ပြီးမီးဖိုချောင်စားပွဲပေါ်မှာထိတွေ့နေတဲ့“ ဘောလုံးတွေ” အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည့်ဘောလုံးများပေါ်လာသည်။ သူဟေးငါအားကစားဘောင်းဘီတို ၀ တ်နေတုန်းကျွန်တော့်ဇနီးကသတိထားမိမှာကိုကြောက်တယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး: ငါနှစ်ပေါင်းများစွာလက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးကျနော်တို့ကလေးတွေကြီးပြင်းလာကြပါပြီ။ သို့သော်လည်းငါသည်အသက်အရွယ် 12 ကတည်းကဆုံးနှင့် 10 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး masturbating ပါပြီ။ ငါနေ့တိုင်းနာရီ pmo ပွုပါပွီနောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်း။ ငါကောင်းစွာပညာတတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့် allways အားကစားအတွက်ပါဝင်နဲ့ကနျြးမာရေးကောငျး၏ပါပြီ။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါ ED 100% ရတယ်ခဲ့ကွောငျးနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ရတယ်။ ငါရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အခါ nofap immidiatly Started www.yourbrainonporn.com 91 days ago က်ဘ်ဆိုက်။
သင် hack ထားတဲ့အဆုံးစွန်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရှု? ဒါကအဆုံးစွန်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် IS ။
ငါသည်သင် reboot အားဖြင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုပေါ်မူတည်ခန့်မှန်း။
ကျွန်ုပ်၏ PIED သည်ရက်ပေါင်း ၅၀ (၃၀ ခက်ခဲသော mode r / nofap) ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ငါကတော့အဆင်မပြေသေးပေမယ့်နေ့စဉ်ပိုကောင်းလာပြီ။
ငါကအဲဒါကို“ rebooting” လို့မှတ်ယူတယ်၊ ငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာအက်ကွဲသွားသလိုငါက“ off” ကိုပိတ်လိုက်ပြီးရက် ၄၀ အကြာမှာတော့ reboot လုပ်တယ်။ ယခုပြန်လည်ပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ရက်သတ္တပတ် ၃-၄ ပတ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၄၈ ရက်ကကျွန်ုပ် reboot စလုပ်ကတည်းကပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်သည်။ ပြန်လည်အသက်မရှင်ပါ ထို့အပြင်၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၃၀) အရွယ်ကတည်းက MO ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲသွားခဲ့သမျှအရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။
ဒါထူးဆန်းတဲ့နေရာပဲ လိင်မှုကိစ္စကိုစိတ်မ ၀ င်စားရန်မဟုတ်ဘဲ၊ ငါက 30 စက္ကန့်လုပ်ခဲနှင့်တော်တော်လေးအများကြီးအချိန်ဂုဏ်ပြုလှည့်ကွက်နှင့်အတူပင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါ 'ပြီးပြီ' ရင်တောင်ငါသူမကိုပြီးအောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ရှည်လျားခက်ခဲနေ၏။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လကဒီလိုဖြစ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါထပ်ခါထပ်ခါလိင်လေ့လာနေသည်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လှည့်ကွက်များနှင့်သမျှသော။ ဒီဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။
ငါမတိုင်မီတစ် ဦး နှိုးဆော်သံမူးယစ်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းနှင့်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်နှိုးဆော်ခြင်းခံရဖို့အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်အားထုတ်မှုကြာလိမ့်မည်ဟုပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်။ သို့သျောလညျးကိုမှန်ကန်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူနှိုးဆော်ခြင်းနည်းနည်းတွန့်ဆုတ်လည်းမရှိ။ ငါ rewiring တွေအများကြီးပြုမိကြောင်းပြသခဲယဉ်းသက်သေအထောက်အထားများ။
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အဝပြန်လည်ညှိနှိုင်းပြီးပြီဆိုသည့်အချက်ကိုကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းကိုရရှိခဲ့သလောက်ကောင်းလျှင်ကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်။ ငါ 90, P, M နှင့်အို abstinence အားလုံးကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာငါ nofap သို့လိုက်လျှောက်သလိုခံစားရတယ် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ဇနီးမှတစ်လလျှင် ၃-၄ ကြိမ်ပင်ရနိုင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင်အထူးသဖြင့်ဤအထူးလိုအပ်ချက်ကိုမလိုချင်ပါ။
ဒီပစ္စည်းကိုထောက်ခံခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေရန်အတွက်ထုတ်ဝေခြင်းအတွက်ဂယ်ရီ Wilson ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကိုငါကြွေးတင်နေတယ်
ငါ pmo လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ကြာမြင့်စွာခဲ့ - 12 နှစ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းပေမယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုတင်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူ။ အနည်းငယ် flatlines မှတဆင့်သွား။ ယခုအထိငါဝေးငါသိအဖြစ်တစ် ဦး အတွက်တကယ်တော့ဖြစ်၏။ ငါလုံးဝမပြင်ဆင်ထားဘူး၊ ဒါပေမယ့်သိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုကိုလုပ်ခဲ့တယ်။
ဒီကိစ္စကိုဒီနေ့ကျင်းပခဲ့တယ်။ ခံတွင်းနီးပါးလွန်း, ခံစားခဲ့ရသည်။ အပြည့်အဝအစွမ်းသတ္တိကိုမလုပ်ကိုင်သော်လည်း Piv အချို့ခံစားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ၈ မိနစ်အောက်မှာရှိပေမယ့်ငါအချိန်ကိုက်မရခဲ့ဘူး။ ၁၀ ရက်ကဲ့သို့ပထမဆုံးစိုက်ထူခြင်းဖြစ်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုမလိုအပ်ဘဲနောက်ကျစွာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လိုအပ်တဲ့အခါကြယ်တွေကဆက်စပ်နေပါတယ်။ သဘာဝကျကျ။
အမှုအရာတက်ရှာနေကြသည်။ Sensitivity ကပြန်လာနေတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ဝက်လောက်ပဲရှိတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်သည် (၂၄ နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်) ပိုကောင်းနိုင်သည်။ ဦး နှောက်သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းမပြုသေးသော်လည်းယနေ့ဖြစ်ပျက်နေသောအရာကကျွန်ုပ်သည်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံနေရသည်ဟုပြသသည်။
ငါဟာ ၁၈ နှစ်အရွယ်ဟားမားတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့်ငါမရောက်ဖူးတဲ့အမှောင်ထုထဲကနေမတိုင်ကြားနိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ထပ် ၈၈ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုမျှော်လင့်နေပါသည်။
ရုံ nofap အပေါ်မှာငါ့အမြင်မျှဝေချင်နှင့်ဤခွဲများကိုမှန်ကန်အမြန်
ငါသည်ဤ add ချင်
သင်ဤပုဒ်မမှအခြားဘာမှမယူလျှင်, porn ကိုကြည့်ရှုရပ်တန့်ပါ။ ယောက်ျားလေးများသည်လိင်မှုကိစ္စအလွန်အမင်းအလွန်အမင်းများပြားနေပုံနှင့်သူတို့အခွင့်အလမ်းရသောအခါအမှန်တကယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အပြည့်အဝနှိုးဆွနိုင်ခြင်းမရှိသော TED ဟောပြောချက်ကိုကြည့်ပြီးနောက်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကျော်ကကျွန်ုပ်ရပ်လိုက်သည်။ တကယ်တော့ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကလုံးလုံးမခက်ခဲခဲ့ဘူး၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူနေတုန်းမှာပဲညစ်ညမ်းစိတ်ကူးကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့ shit အားလုံးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ငါထင်တာနှစ် ၂၀ ရှိပြီ။ ငါ porn ကိုရပ်တန့်နှင့်ထိုပြproblemနာကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းခဲ့သည်။
Re: အအောင်မြင်သော reboot PE အတွက်ရလဒ်
ငါအောင်မြင်စွာ Reboot လုပ်သွား (ကျနော် PIED ခဲ့) နှင့်ယခုငါ၏အစိုက်ထူကြီးမြတ်ဖြစ်ကြပေမယ့်ငါ PE ရှိသည်: S က
သင်ဤ post ကိုရေးသားခဲ့သည်ပြီးနောက်သင် Anon ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကို၏ကျန်ပြောပြနိုင်ပါသလား?
PIED update: SO -“ မင်းဟာနောက်ဆုံးတော့အနားယူနိုင်ပြီထင်တယ်၊ ဒါကတကယ်ကိုကောင်းလိုက်တာ။ :)”
နောက်ခံသမိုင်း: ငါပထမဦးဆုံး 10 yrs လွန်ခဲ့တဲ့နဲ့တူလိင်တက်ကြွဖြစ်ခြင်းစတင်ကတည်းကငါ ED အပေါ်နဲ့ off တိုက်ပွဲတွေပါပြီ။ အစဉ်မပြတ်ငါကွန်ဒုံး, အာရုံကြော, စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်သမျှကစွပ်စွဲပေမယ့်နေ့စဉ် PMO ဆက်ပြောသည်။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောဆက်ဆံရေးအပေါ်မျိုးကွဲထားယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို, ငါ့ SO နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအစို့ခဲ့သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ NoFap စတင်ကတည်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်ကောင်းအချို့ကိုသတိပြုမိခဲ့ပေမယ့်ရက်ပေါင်း ၈၀ အပြည့်အ ၀ ရက်ပြီးတဲ့နောက်ညမှာသူမအဲဒီစကားတွေပြောနေခြင်းနှင့်အတူပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။ PMO ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင် ပိုမို၍ ရောက်ရှိနေနိုင်ပြီးမှန်ကန်သော၊ မှားယွင်းနေသောအရာများကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘဲအခြားလူသားတစ် ဦး ၏ထိတွေ့မှု၊ နွေးထွေးမှုနှင့်ခံစားမှုတို့ကိုသာတွေ့ကြုံခံစားခံစားရသည်။ ငါ pornhub တွင်တွေ့ရသော "လှုံ့ဆော်မှု" အမျိုးမျိုးနှင့်အစီအစဉ်များအတွက်ကျွန်ုပ်၏မှတ်ဉာဏ်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ယခု၎င်း၏အနေအထားတစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့သွားရန်အချိန်ရှိမရှိကိုမစဉ်းစားတော့ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှာဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ၏အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သောစွမ်းဆောင်ရည်များထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အနား ကပ်၍ လာမည့်လူကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။
သူချင်း fapstronauts up ပြုလုပ်ထားပါ။ ငါ ED နှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုရဖို့ဒီစတင်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မ ပို. ပင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သောငါ၏စိတ်ဓာတ်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုသဘောပေါက်နေပါတယ်။ သင်ကမှာအလုပ်လုပ်စောင့်ရှောက်လျှင်သင်အပြင်းအထန်နေကြသည်ဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။
ED သွေးဆောင် porn, သင်က fix ခဲ့တာလဲ
yeah ငါရှိသည်! ငါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိန်းမနှင့်ခွန်အားမရှိခြင်း၏လိင်တူချစ်သူဖြစ်နိုင်သည်စဉ်းစားရန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ porn ယောက်ျားအားလုံးအချိန်များတွင်ခဲယဉ်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ဖို့ရှိသည်ယုံကြည်ဖို့ငါ့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အစဉ်အမြဲကြီးမားတဲ့အရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မအိပ်ရာခန်း၌နှေးကွေးသောအရာတို့ကို ယူ. asap porn ကို အသုံးပြု. ကိုရပ်တန့်သင့်ကြောင်းဤနေရာတွင်အကွံဉာဏျ (4hr / နေ့စွဲ) တယ်
ချက်ချင်းပဲပြန်မလာပါဘူး။ ဒါပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကပိုစိုက်ထူလာတယ်။ တစ်နှစ်နားပြီးတဲ့အခါမှာငါစိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ကြောင်းသတိပြုမိလိုက်သည်။ ငါခက်ခဲတော့မည်ဖြစ်သော porn မြင်ကွင်းများကိုအသည်းအသန်စဉ်းစားရန်မလိုခဲ့ပါ။ အခုဆိုရင်ငါဟာအမှားအယွင်းမရှိဘဲညစ်ပတ်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲမျှဝေခံစားရတဲ့ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်၊
ငါနေ့ ၂၀ ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းတဖြည်းဖြည်းပိုကောင်းလာတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးငါစိုက်ထူမှုအပြည့်အဝကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်၏ကြွက်သားများကိုတင်းမာရန်မလိုအပ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲငါသုတ်ရည်လွှတ်ဖို့မိနစ် ၃၀ လိုကြာတာမျိုးမတွေ့ရဘူး။ ၅ မိနစ်အတွင်းမှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုငါသုတ်သင်နိုင်သည်။ ငါယခုပိုပြီးဂိမ်းအမှုအရာစိုက်ထူရ။ ယခုငါပိုမိုမကြာခဏစိုက်ထူရ။ ငါရှိသည်တစ်ခုတည်းသောအိပ်မက်မှတ်မိသေးတယ်။ ငါအများကြီးပိုကောင်းခံစားရတယ်။ ဒီတော့ yeah ကနေ့တိုင်းပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့။ အရှုံးမပေးပါနှင့်
ဟုတ်ကဲ့ porn ကိုဖယ်ရှားပစ်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ် ခင်ဗျားဟာကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖိအားအများကြီးပေးနေတယ်လို့မင်းထင်တယ်၊ လိင်ဆက်ဆံဖို့သွားသင့်တဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်လို့ဘယ်သူပြောတာလဲ။ အဆိုးဆုံးအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်လာရင်ကလေးရဖို့အခြားနည်းလမ်းတွေလည်းရှိတယ်။ ငါအပန်းဖြေအနားယူရုံအတွေ့အကြုံကိုခံစားအပေါ်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်နှင့်ဤသည်လည်းငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။
ဟုတ်တယ်။ တစ်လကျော်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော့်ရဲ့ ED ပိုကောင်းလာတယ်။ ငါမှာ ED အတိအကျမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါက ၇၅% လိုငါ့ဇနီးကိုအပြည့်အဝမနိုင်ခဲ့ဘူး။
ငါ masturbate လျှင်ပင် Now ကို, ငါ့ဇနီးနှင့်အတူလိင်ကဖြစ်သင့်လိုပဲကိုယ့်စိတ်ကူးဖြစ်ပြီး, သူ့ကိုငါနှင့်အတူတစ်အများကြီးပိုရငျးနှီးပါပဲ။ ငါမရှိတော့သူတို့အပေါ်မှာဒုက္ခအတွေးများနှင့်နောက်ခံစိုးရိမ်စိတ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။